अमेरिकामा गोली हानी एक नेपालीसहित ४ जनाको हत्या ! « MNTVONLINE.COM
एजेन्सी । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कम्तीमा चार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मेरिल्याण्डको बाल्टीमोर काउन्टीमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा एक नेपालीसहित चार जना मारिएका स्थानीय प्रशासनले पुष्टि गरेको छ । मारिने अन्य व्यक्तिहरू ल्याटिन अमेरिकी रहेका पनि बुझिएको छ ।
बाल्टिमोर काउन्टी प्रहरीले आक्रमण गर्ने व्यक्ति ५६ बर्षीय एभर्टन ब्राउन भएको र उक्त व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली लागि मृत्यु भएको बताइएको छ ।
मानसिक रोगी रहेको उक्त आक्रमणकारीले ग्यास खोलेर आफ्नै घरमासमेत आगो लगाएपछि अन्घाधुन्ध गोली प्रहार गरेको बताइएको छ । आगलागीका कारण छिमेकमा रहेका अन्य दुई घरमा पनि सामान्य क्षति भएको छ ।
उक्त गोलीकाण्डमा कूल ४ जना मृत्यु हुनेमध्येका अन्दाजी २५ वर्षीय सागर घिमिरे भएको पुष्टि भएको छ । सागर निकै प्रतिभावान, होनहार विद्यार्थी थिए । उनले त्याहाँको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए ।
अर्का एक नेपाली घाइाते भएका छन् । घरमा आगो लागेपछि बाहिर भाग्ने बित्तिकै ब्राउनले घिमिरेलाई र श्याम अधिकारीलाई गोली हानेका थिए । संयोगवस अधिकारी बचेका छन् । २६ वर्षीय अधिकारीको अस्पतालमा उपचार भै रहेको छ । उनको नेपालको सर्लाही घर भएका व्यक्ति हुन् । उनको अवस्था खतरा मुक्त छ ।
युरो २०२० : पोर्चुगलको जितमा रोनाल्डोले बनाए तीन रेकर्ड
इजरायलद्वारा गाजामा पुनः आक्रमण !
अमेरिकी नागरिकलाई राष्ट्रपति बाइडेनले भनेः ‘सकेसम्म छिट्टै’ कोभिडविरूद्धको खोप लिनू !
चीनद्वारा नेटोको ‘प्रणालीगत चुनौति’ को दावीलाई अस्वीकार !